Germalka Hooyo Dishay Shan kamid ah Caruurteeda oo Xabsi Daa’in lagu Xukumay
HomeWararka MaantaGermalka Hooyo Dishay Shan kamid ah Caruurteeda oo Xabsi Daa’in lagu Xukumay
November 6, 2021 Wararka Maanta, Wararka Caalamka 0
Maxkamad ku taal galbeedka Jarmalka ayaa khamiistii xukun xabsi daa’in ah ku xukuntay haweeney 28 jir ah oo dishay shan ka mid ah lix caruur ah oo ay dhashay .
Garsooraha ayaa dilka ku tilmaamay “musiibo.” Maxkamaddu waxay heshay dambi gaar ah oo halis ah, taasoo la micno ah in haweeneydu aysan awoodi doonin inay dalbato sii-daynteeda ka dib 15 sano oo xabsi ah.
Haweeneyda ayaa lagu eedeeyay in ay carruurta ku suuxisay gurigeeda ka dibna ay neefta ku qabatay xilli ay ku jirtay musqusha bishii September ee sanadkii hore. Da’da carruurta ayaa u dhexeysay 18 bilood ilaa 8 sano jir.
Cunugeeda curad oo markaas 11 jir ahaa ayaa ka badbaaday maadaama uusan guriga joogin intii uu dilka dhacayay. Qoysku waxay ku noolaayeen magaalada Solingen.
Haweeneyda ayaa ka aamustay eedeymaha loo soo jeediyay intii ay socotay dacwada. Waxay isku dayday inay is disho iyadoo ku hor booday tareen ka dib markii dembigu uu dhacay.
Waxaa la rumeysan yahay in ay dishay carruurta ka dib markii ay aragtay sawirka ninkeeda oo ay weheliyaan lammaane cusub. Waxaa la sheegay in ay fariin qoraal ah ugu sheegtay maalintii dambiga uu dhacay in uusan dib u arki doonin caruurtiisa.
Sweden oo Baasaboorka kala wareegtay Nin Soomaali ah oo lunsaday malaayiin dollar
Xiisad ka taagneyd Koonfurta Gobolka Mudug oo laga gaaray Heshiis Hordhac ah